Iisombululo kunye neeRisin zokuPenda kweoli
Iipropati zee-solvents ezahlukahlukeneyo kunye nama-resin asetyenzisiweyo kwipeyinti yeoli
Iimvumba zongezwa kwiipende zesoyile ukuze zitshintshe okwethutyana indlela ezisebenza ngayo kwaye zenzelwe ukukhuphuka ngokulinganayo kwaye ngokupheleleyo njengoko upende lweoli lubomile. (Ngokuqinisekileyo, ixesha elichanekileyo lixubile, kungekhona zonke iisombululo, kodwa akusiyo igama eliqhelekileyo lisetyenziswe.) Iisombululo zisetyenziselwa ukutshabalalisa i-resins, ukwenza ama-mediums , ukucoca, kunye nokucoca iibhulashi. Kubalulekile ukusebenzisa i-solvents kwigumbi elinomoya okhuselekileyo kwaye ukhumbule ukuba ziyavutha (zibambe umlilo kalula).
Iipuphu zeePahla zeOyile kunye neeRisin
I-Turpentine iyisisombululo sendabuko esisetyenzisiweyo kwipeyinti yeoli . Isekelwe kwi-resin yomthi kwaye isantya sokuphuphuma ngokukhawuleza, ukukhulula umphunga onobungozi. Iyakwazi ukuxutywa ngesikhumba esiluphilileyo. Sebenzisa kuphela udidi lwezobugcisa njengoko udidi lwezoqoqosho olufumene kwiivenkile ze-hardware mhlawumbi liqule ukungcola; kufuneka ibe ngumbala, njengamanzi. Kwakhona ubizwa ngokuba ngumoya we-turpentine, ioli ye-turpentine, i-turpentine yangempela, i-turpentine yesiNgesi, i-turpentine ene-distilled, i-turpentine eguqulelwe kabini, okanye iinguqu nje.
Imimoya yamaminerali isekelwe kwi-petroleum kwaye inomlinganiselo wokukhuphuka ngokulinganayo, ukukhulula umphunga onobungozi. Kuthiwa ukuba ungagcini ngesikhumba esiluphilileyo, kodwa kunengqiqo ukuthatha ingqalelo, ingakumbi ukuba unesikhumba esikhathazekile. Imimoya yamaminerali ingabizi kakhulu kune-turpentine. Abanye abantu basabela ngokuncinci kwimimoya yombumbulu kunokugqithisa. Imimoya yamaminerali iyona yongqinela ngakumbi kunezinto ezingenasiphelo.
Kwakhona kwaziwa ngokuba yimimoya emhlophe.
I-Odorless mineral spirit isekelwe kwi-petroleum kwaye inomlinganiselo wokukhuphuka ngokulinganayo. Kuthiwa ukuba ungagcini ngesikhumba esiluphilileyo, kodwa kunengqiqo ukuthatha ingqalelo, ingakumbi ukuba unesikhumba esikhathazekile. Imimoya ye-mineral ine-Odorless ayikho into embi kakhulu, iyabiza kakhulu kunezinto eziqhelekileyo zemimoya yombumba njengoko kuye kwachithwa ezinye izinto ezinobungozi ezinobungozi.
Amanqaku afaka i-Turpenoid, Exin-ex, iGamsol.
Nangona ukuvumba kwamnandi kwe-citrus-based thinners , musa ukucinga nje ukuba abayikukhupha nayiphina imiphunga emibi-khangela ukuba imveliso yenziwe ntoni. Khangela into efana ne-Zest-It, eyenziwa ngeoli ye-citrus yeoli kunye ne-non-toxic, non-inflammable solvent. (Kakade, ukuba ufumana i-migraines ukusuka kuma-oranges, oku akuyi kuba yinto enhle ukuyisebenzisa!)
Ama-mediums ase-Alkyd: Ukuba ufuna ukukhawulezisa ixesha lokumisa kwepeyinti yeoli, cinga ukusebenzisa i-alkyd-based medium ezifana ne-Liquin (W & N) okanye i-Galkyd (Gamlin).
Iphulo lokuPhepha kweePuphu zeOyile
Uvavanye umgangatho we-solvent ngokubeka encinane kwiphononti yephepha kwaye uvumele ukuba kuphephe. Ukuba ayishiyi nayiphi na indawo yokuhlala, ibala, okanye iphunga, kufuneka libe yanele ngokwaneleyo yokupenda ioli.
IiRains zisetyenziselwa ukwandisa i-gloss yepeyinti yeoli, ukunciphisa umbala kunye nokomisa ixesha eliphakathi, kwaye ungeze umzimba ukuba womeze amafutha . Iyona nto isetyenziswa ngokuqhelekileyo yi-resin yemvelo eyaziwayo njengeDamar , emele ixutywe kunye ne-turpentine njengoko ayiyi kuchithwa ngokupheleleyo xa ixutywe nemimoya yamaminerali. I-Damar ingasetyenziselwa nje nge-varnish.
Imifanekiso yokuPenda: Okufunekayo Ukuqalisa
I-Winsor ne-Newton Artist Acrylics
IiNkonzo zokuTyhila ngeeTyhini
IYunivesithi yeSan Francisco Admissions
Injongo Yokwenene Nokuba Nentsingiselo 'yeNamaste'
Iingoma ezidumileyo zeR & B
I-Top 10 yokuqala kakhulu 'yokuqala' yeeNqanawa zase-Atlantic